Celebrity Archives » Myanmar Family Life
စာရေးဆရာမ ခင်ခင်ထူးနဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေကို ဝန်ချတောင်းပန်ခဲ့တဲ့ အောင်ရေချမ်း
“ပျားရည်အိုင်”၊ “ကျွန်မက မဟေသီ” စတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အပြည့်အဝ ရရှိထားတဲ့ မင်းသားချောလေး အောင်ရေချမ်းက သရုပ်ဆောင်တဲ့ နေရာမှာ တကယ့်လက်တွေ့နဲ့မခြား သရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် သဘာဝမင်းသားလို့တောင် တင်စားလို့ရပါတယ်။ အောင်ရေချမ်းကို အမြို့မြို့အနယ်နယ်က အသက်အရွယ်မျိုးစုံ ပရိသတ်တွေက အားပေးကြတာ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ် အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ မင်းသားတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်ရေချမ်းက လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက အင်တာဗြူးတစ်ခုမှာ စာရေးဆရာမ ခင်ခင်ထူးရဲ့ အမည်ကို ခင်ခင်ကြီး လို့ မှားယွင်းပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။ ထိုကိစ္စနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ခင်ခင်ထူးရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံခဲ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက် အောင်ရေချမ်းက “ဆူးပန်းခွေသွယ်ဘယက်နှင့်ပေရွက်လိပ် နားတောင်းဆင် စာရေးဆရာမခင်ခင်ထူး အစား ခင်ခင်ကြီးလို့ အမှတ်တမဲ့မှားယွင်းစွာ ဖြေဆိုလိုက်မိတဲ့ အတွက် ဆရာမခင်ခင်ထူးနဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်များကို အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။” ဆိုပြီး ရိုသေစွာနဲ့ သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကတဆင့် တောင်းပန်ထားပါတယ်။
အောင်ရေချမ်းက လက်ရှိမှာလဲ ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ ကြော်ငြာဓာတ်ပုံတွေကိုလဲ ရိုက်ကူးပေးနေတာဖြစ်ပြီး အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို မအားမလပ်နိုင်အောင် ဆက်တိုက်ဆိုသလို လုပ်ကိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်ရေချမ်းကတော့ သူ့ရဲ့အမှားကိုသိပြီး ချက်ချင်းဆိုသလို တောင်းပန်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာမ ခင်ခင်ထူးရဲ့ ပရိသတ်တွေလဲ ကျေနပ်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
CRD-Rowena,Source; Aung Yay Chan
စာရေးဆရာမ ခငျခငျထူးနဲ့ စာဖတျပရိသတျတှကေို ဝနျခတြောငျးပနျခဲ့တဲ့ အောငျရခေမျြး
“ပြားရညျအိုငျ”၊ “ကြှနျမက မဟသေီ” စတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတှနေဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကို အပွညျ့အဝ ရရှိထားတဲ့ မငျးသားခြောလေး အောငျရခေမျြးက သရုပျဆောငျတဲ့ နရောမှာ တကယျ့လကျတှနေဲ့မခွား သရုပျဆောငျနိုငျတာကွောငျ့ သဘာဝမငျးသားလို့တောငျ တငျစားလို့ရပါတယျ။ အောငျရခေမျြးကို အမွို့မွို့အနယျနယျက အသကျအရှယျမြိုးစုံ ပရိသတျတှကေ အားပေးကွတာ ဖွဈပွီး ပရိသတျ အခိုငျအမာရရှိထားတဲ့ မငျးသားတဈဦးပဲ ဖွဈပါတယျ။
အောငျရခေမျြးက လှနျခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးက အငျတာဗွူးတဈခုမှာ စာရေးဆရာမ ခငျခငျထူးရဲ့ အမညျကို ခငျခငျကွီး လို့ မှားယှငျးပွီး ပွောခဲ့ပါတယျ။ ထိုကိစ်စနဲ့ ပကျသတျပွီး ခငျခငျထူးရဲ့ စာဖတျပရိသတျတှရေဲ့ ဝဖေနျမှုကို ပွငျးပွငျးထနျထနျခံခဲ့ရပါတယျ။
အဲ့ဒီအတှကျ အောငျရခေမျြးက “ဆူးပနျးခှသှေယျဘယကျနှငျ့ပရှေကျလိပျ နားတောငျးဆငျ စာရေးဆရာမခငျခငျထူး အစား ခငျခငျကွီးလို့ အမှတျတမဲ့မှားယှငျးစှာ ဖွဆေိုလိုကျမိတဲ့ အတှကျ ဆရာမခငျခငျထူးနဲ့ စာဖတျပရိသတျမြားကို အနူးအညှတျတောငျးပနျပါတယျ။” ဆိုပွီး ရိုသစှောနဲ့ သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာကတဆငျ့ တောငျးပနျထားပါတယျ။
အောငျရခေမျြးက လကျရှိမှာလဲ ဇာတျလမျးတှဲနဲ့ ကွျောငွာဓာတျပုံတှကေိုလဲ ရိုကျကူးပေးနတောဖွဈပွီး အနုပညာလုပျငနျးတှကေို မအားမလပျနိုငျအောငျ ဆကျတိုကျဆိုသလို လုပျကိုငျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
အောငျရခေမျြးကတော့ သူ့ရဲ့အမှားကိုသိပွီး ခကျြခငျြးဆိုသလို တောငျးပနျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဆရာမ ခငျခငျထူးရဲ့ ပရိသတျတှလေဲ ကနြေပျကွမယျလို့မြှျောလငျ့ပါတယျ။ အခြိနျပေးပွီး ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးကို ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျ။
စိုငျးစိုငျးနဲ့ ဘနျနီဖွိုးတို့တောငျ တအံ့တသွခြီးကြူးရတဲ့ ငါ့ရညျစားက ပိုမိုကျတယျသီခငျြးကို Cover Song ပွနျတီးထားတဲ့ ငဲငယျလေးရဲ့ အမိုကျစားဗီဒီယိုဖိုငျ
ပရိသတျကွီးရေ.. အနုပညာလောကမှာ ထူးခွားတဲ့ ပငျကိုယျစှမျးရညျတှနေဲ့ အောငျမွငျမှုတှအေပွငျ ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးခဈြခငျမှုတှကေိုပါ အခိုငျအမာရရှိထားသူကတော့ ခဈြစနျးမောငျရဲ့ သမီး အဆိုတျော ငဲငယျလေးပဲ ဖွဈပါတယျနျော..။
အဆိုတျောငဲငယျလေးကတော့ သူရဲ့ တေးသီခငျြးကောငျးလေးတှဟော ပရိသတျတှရေဲ့အကွိုကျနဲ့ ထပျတူကပြွီး အမိုကျစားဂီတာတီးခတျမှုမှာလညျး ပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျကြှမျးကငျြလှနျးသူမို့ ဖခငျရဲ့ အမှကေို ရရှိထားတယျလို့ ဆိုရမှာပါပဲနျော..။
အခုတဈခါမှာလညျး ငဲငယျလေးက ငါ့ရညျစားက ပိုမိုကျတယျဆိုတဲ့ သီခငျြးလေးကို တဈကိုယျတျော ဂီတာSolo တီးခတျထားတဲ့ အမိုကျစား ဗီဒီယိုဖိုငျလေးနဲ့လညျး ပရိသတျတှကေို တငျဆကျပေးလိုကျပွနျပါတယျနျော..။
ကြှမျးကငျြလှနျးပွီး လုံးဝအမိုကျစား တီးခတျထားတာမို့ ငဲငယျလေးရဲ့ ဂီတာSolo တီးခတျမှု ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကိုတော့ မူရငျးအဆိုတျောတှဖွေဈတဲ့ စိုငျးစိုငျခမျးလှိုငျနဲ့ ဘနျနီဖွိုးတို့တောငျ ခြီးကြူးထားကွတာ တှရေ့ပါတယျ..။
ငဲငယျလေးရဲ့ ဂီတာ Solo တီးခတျမှု ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို သူတို့ရဲ့ လူမှုကှနျယကျဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာတှကေနေ ပွနျ Share ထားပွီး ခြီးကြူးဂုဏျပွုထားတာပဲ ဖွဈပါတယျနျော..။
မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေ သဲသဲလှုပ်အားပေးခြင်း ခံနေရတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသား ၅ဦး
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ လက်ရှိမိန်းကလေး ပရိသတ်တွေ သဲသဲလှုပ်အားပေးခြင်း ခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင် သရုပ်ဆောင် မင်းသားများအနက် မိုမိုလေး ရဲ့ ချစ်ပရိသတ်တွေ အတွက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိပြီး မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ အသဲနှလုံး ကို ဖမ်းစားထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသား ၅ဦးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
သူတို့ကတော့ သရုပ်ဆောင် အောင်ရဲလင်း ၊ ဒေါင်း ၊ တိုင်ရွန်၊ ခါရာ၊ ပိုင်တံခွန် တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် အောင်ရဲလင်းကတော့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုတည်းက အောင်မြင်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသား ဖြစ်ပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်းမှာ သူ့က အရင်ကထက်ပိုမိုက်တဲ့ အမိုက်စား Body ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိတာကြောင့် လူငယ် မိန်းကလေး တွေသဲသဲလှုပ်အားပေးခြင်းခံနေရတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသား တစ်ဦးဖြစ်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မေ လ ၂ ရက်နေ့က ရုံတင်ပြသတဲ့ ” မှားတဲ့ ဘက်ကနေကြည့်ပါ ” ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှလည်း အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် ဒေါင်း ကလည်း သရုပ်ဆောင် ပိုင်းမှာ အောင်မြင်သလို သူ့ရဲ့ ချောမောလှပတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ သူ့ရဲ့မျက်လုံးလေးကြောင့် မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေကြားမှာ သဲသဲလှုပ်အားပေးခြင်း ခံနေရတဲ့သရုပ်ဆောင် မင်းသားတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါင်း သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ လိပ်ပြာစံအိမ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကလည်း အောင်မြင်မှု များစွာရရှိထားပြီး အနုပညာကို ကြိုးစား လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မင်းသား တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် တိုင်ရွန်ကတော့ မော်ဒယ်လ် ဘဝကနေ သရုပ်ဆောင်ဘက်ကိုကူးလာပြီး သရုပ်ဆောင်မင်းသားတစ်ဦးအဖြစ် ပရိသတ်တွေအားပေးခြင်းခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။
တိုင်ရွန်ကလည်းဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အမိုက်စား Body ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေ တစ်ခဲနက် အားပေးခြင်း ခံနေရတဲ့ မင်းသား တစ်ဦးပါ။
မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန် ဟာာဆိုရင် နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေ အသဲစွဲ မင်းသား တစ်ဦးပါ။
ပိုင်တံခွန်က လူငယ် မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင်တွေထဲမှာ မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေ သဲသဲလှုပ်အားပေးခြင်း ခံထားရတဲ့ သူဆိုလည်း မမှားပါဘူး၊ သူက အနုပညာကို ကြိုးစား လုပ်ရင်း အောင်မြင်မှု လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ လျှောက်လှမ်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် ခါရာ ကတော့ Mr. ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ရင်း ပရိသတ်တွေကြားနာမည်ကြီးလာသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခါရာ သရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးခဲ့တဲက ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွေကလည်း အကယ်ဒမီဆုရရှိထားတာပါ။
ခါရာ က ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ ရုပ်ရည် ကြောင့် မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေ အားပေးခြင်းခံထေားရတဲ့ မင်းသား မိုမိုလေး ပရိသတ်ကြီးကလည်း လက်ရှိမိန်းကလေး ပရိသတ်တွေ ကြား ရေပန်းစားနေတဲ့ သရုပ်ဆောင် (၅) ဦးကို အကြိုက်တွေ့လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ မိုမိုလေး ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။
ဒီကနေ့မှာ လူပြောများနေတဲ့ ဂျပန် နာမည်ကြီး မင်းသားကြီးနဲ့ ကိစ္စ မတ်မတ် သင်ဇာ ပြောပြီ
ဂျပန်နိုင်ငံက နာမည်ကျော် အ၀ှာမင်းသားကြီး ဂျပန်ဂတုံး ဆိုသူနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ မင်းသမီး တစ်လက်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော် တို့အကြောင်းတစ်ချို့ကို လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ အကောင့်တစ်ခုကနေပြီး တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအကောင့်သည် Jung Hong Kim ဆိုတဲ့အကောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအကောင့်မှ တင်ခဲ့တာကတော့..
looking for companies sponsoring us. Don’t miss it… လို့ လူမှုကွန်ယက်မှာ တင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး..Mitsugu Somezima ဂျပန်ဂတုံး ဆိုသူ အကောင့်မှ ရှယ်ယူပြီး “Will they be able to play together?” This isapost called  ဟုဆိုကာ မျှဝေထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ထိုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော်မှ သူမရဲ့ ဖေ့ဘုတ်အကောင့်ကနေပြီး ” မြန်မာနိုင်ငံက တချို့သူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေပါ ” ဆိုပြီး ရေးသားတင်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မင်းသမီး သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ တင်ပြထားမှုအောက်တွင်လည်း သင်ဇာဝင့်ကျော် ရဲ့ ပရိသတ်များက မခံမရပ်နိုင် ဝေဖန်ပြောဆို နေကြာင်းကိုလည်း ထပ်မံတွေ့မြင်ရပါတယ်..။
ဒီကနမှေ့ာ လူပွောမြားနတေဲ့ ဂပြနျ နာမညျကွီး မငျးသားကွီးနဲ့ ကိစ်စ မတျမတျ သငျဇာ ပွောပွီ
ဂပြနျနိုငျငံက နာမညျကြျော အဝှာမငျးသားကွီး ဂပြနျဂတုံး ဆိုသူနဲ့ မွနျမာပွညျရဲ့ နာမညျကွီးတဲ့ မငျးသမီး တဈလကျဖွဈတဲ့ သရုပျဆောငျ သငျဇာဝငျ့ကြျော တို့အကွောငျးတဈခြို့ကို လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာမှာ အကောငျ့တဈခုကနပွေီး တငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
looking for companies sponsoring us. Don’t miss it… လို့ လူမှုကှနျယကျမှာ တငျခဲ့တာဖွဈပွီး..Mitsugu Somezima ဂပြနျဂတုံး ဆိုသူ အကောငျ့မှ ရှယျယူပွီး “Will they be able to play together?” This isapost called  ဟုဆိုကာ မြှဝထေားတာကို တှရေ့ပါတယျ။
ထိုကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး သရုပျဆောငျ သငျဇာဝငျ့ကြျောမှ သူမရဲ့ ဖဘေု့တျအကောငျ့ကနပွေီး ” မွနျမာနိုငျငံက တခြို့သူတှရေဲ့ စိတျဓာတျကလေးတှပေါ ” ဆိုပွီး ရေးသားတငျပွထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။
မငျးသမီး သငျဇာဝငျ့ကြျောရဲ့ တငျပွထားမှုအောကျတှငျလညျး သငျဇာဝငျ့ကြျော ရဲ့ ပရိသတျမြားက မခံမရပျနိုငျ ဝဖေနျပွောဆို နကွောငျးကိုလညျး ထပျမံတှမွေ့ငျရပါတယျ..။